:: My Little World ::: February 2008
Pls donate to Hlaing Thayar Fire Victims
မန္တလေး ရတနာပုံဈေး မီးလောင်တဲ့ နေ့ မှာပဲ ရန်ကုန်မြို့ ၊ လှိုင်သာယာ မြို့ နယ်မှာလည်း မီးလောင်မှု့ဖြစ်ပွါးခဲ့ ပါတယ်။ လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာ လောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့ မီးလောင်မှု့ကြောင့် အိမ်ခြေ ၂၀၀ ကျော် မီးလောင်ခံရပြီး မိသားစု ၇၀၀ ကျော် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် မီးလောင်၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ - ဧရာဝတီ
RAVEN Blood Donor Club အဖွဲ့ မှ အလှူငွေများ စုစည်းကောက်ခံပြီး လိုအပ်သော ပစ္စည်းများဝယ်ယူကာ၊ လှိုင်သာယာမီးဘေးဒုက္ခသည်များအား ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက် လှူဒါန်းရန် စီစဉ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒီစင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ကောက်ခံရရှိတဲ့ အလှူငွေများကို မတ်လ ၃ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား ပြီး ရန်ကုန်ကို ပို့ မယ်လို့ သိရပါတယ်။ လှိုင်သာယာမီးဘေးဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီချင်တယ်၊ အလှူငွေထည့်ဝင်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်မ စီကို ဆက်သွယ်နိုင်သလို၊ ကို အီးမေးပို့ ပြီး ဆက်သွယ် မေးမြန်း လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှ လူများ လှူဒါန်းချင်တယ်ဆိုရင် Raven Blood Donor အဖွဲ့ Website မှာပေးထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။ RAVEN Blood Donor Club
Let's save the Fire victims By July Dream
ကိုယ်တိုင် ပါဝင်လှူတန်းကြ သလို၊ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းအသိုင်းအ၀ိုင်း နီးစပ်ရာ လူတွေစီကလည်း အလှူငွေများ စုစည်း ကောက်ခံပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 2/29/2008 11:15:00 AM2comments
Yet another sleepless night!
မနေ့ ညက တစ်ညလုံး ကောင်းကောင်း အိပ်လို့ မရဘူး။ အိပ်ပျော်မလိုဖြစ်သွားလိုက်၊ လန့် နိုးလာလိုက်၊ အိပ်မက်ဆိုးတွေ မက်လိုက်နဲ့မိုးသာလင်းသွားတယ် အိပ်လိုက်ရတယ်လို့မခံစားရဘူး။ စိတ်ညစ်စရာတွေရှိနေလို့ များလား ဆိုတော့လဲ မရှိ။ တွေးစရာတွေများနေလို့ လား ဆိုတော့လဲ မဟုတ်။ ဘာကြောင့် အဲဒီလို ဖြစ်တာမှန်းလဲ မသိ။ တကယ့်ကို အူကြောင်ကြောင်နိုင်တဲ့ ညတစ်ညပဲ။ ညတုန်းက ဖြစ်နေတာ ဒီအောက်က ပုံထဲက အတိုင်းပဲ။ အိပ်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်၊ နာရီကြည့်လိုက် နဲ့အချိန်တွေကုန်သွားတယ်။
ခုချိန်ထိလည်း ပင်ပန်းတယ် မခံစားရသေးဘူး။ အိပ်ချင်စိတ်လည်း မပေါ်ဘူး။ ဟင်း... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနေ့ ညတော့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်မယ် ထင်ပါတယ်။ အိပ်မပျော်လို့ လည်း မဖြစ်ဘူး။ လိုအပ်ရင် အိပ်ဆေးသောက်အိပ်မှ ဖြစ်မယ်။ ဒီရက်ပိုင်းက အလုပ်များတယ်။ အားလပ်ရပ်မှာတောင် နားရမယ် မထင်ဘူး။ အလုပ်များတဲ့ အချိန်တွေမှာ ပေပေတေတေနေလို့မဖြစ်ဘူး။ စားဝင်၊ အိပ်ပျော်မှ အလုပ်လုပ်ရတယ် အဆင်ပြေတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး ပိန်လို့ လည်း မကောင်းတော့ဘူးလေ။ -_-'
Photo Source : McMorbid - No Sleep by Rimfrost
Posted by Nay Nay Naing at 2/28/2008 02:40:00 PM2comments
ဒီနေ့ အလုပ်က စောစောပြန်ရောက်တာနဲ့သီချင်းတွေ လိုက်ရှာရင်း New Soul ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ထပ်ခါထပ်ခါ နားထောင်ဖြစ်သွားတယ်။
New Soul - Yael Naim (YouTube)
New soul Live Yael Naim & Lucie Star Academy (YouTube)
hoping I could learnabit about what is true and fake.
ဒီသီချင်းကို French-Israeli အဆိုတော် Yael Naim က ကိုယ်တိုင်ရေးပြီး ကိုယ်တိုင်သီဆိုထားတာပါ။ သီချင်းနားထောင်ရင်း ဒီသီချင်းအကြောင်းကို Wiki နဲ့Google မှာ လိုက်ရှာဖတ်ကြည့်ဖြစ်လိုက်တော့ ဒီသီချင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်နေ့ က The Billboard Hot 100 မှာ နံပတ် ၉ ချိတ်တယ်လို့သိလိုက်ရတယ်။ ဒီသီချင်းလေးက နားထောင်လို့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Apple ရဲ့MacBook Air ကြော်ငြာမှာ ဒီသီချင်းကို အသုံးပြု ထားတာကြောင့် အခုလို Single အဖြစ်ပြန်ထွက်လာတဲ့ အရင်ကထက် ပိုပြီး နာမည်ကြီးသွားတာ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
Apple - MacBook Air Ad
Yael Naim - Official Website
New soul Live Yael Naim & Lucie Star Academy(YouTube)
Posted by Nay Nay Naing at 2/27/2008 11:23:00 PM0comments
မန္တလေး ရတနာပုံဈေး မီး
မနေ့ က မန္တလေး ရတနာပုံဈေးမှာ လောက်ကျွမ်းခဲ့တဲ့ မီး နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းဓာတ်ပုံတွေ။
Anony's Pictiger Album
Zin Min Swe's multiply photo- Fire At YadanabonComplex
Ko Aye Chan's Photobucket - Yadanarpone Zay
U Hteik's Fire At Mandalay YandanaBom Market
Mg Ba Oo's multiply photo - Fire at Yadanarbon Market(25/26 Feb 2008)
All Credit go to Original uploader
ရတနာပုံဈေး မီးလောင်မှု့ မြင်ကွင်း မှတ်တမ်းတင် ဗီဒီယိုကလစ်များ
Credit to Wai Pho Aung from NativeMyanmar
နေးတစ်ဖိုရမ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Links တွေနဲ့အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရှာတွေတာတွေပါ။ မနေ့ မနက် စောစောပိုင်းက စတင်လောက်ကျွမ်းခဲ့တာမီးဟာ မနေ့ ညပိုင်းမှာ ငြိမ်သက်သွားတယ် သိရတယ်။ ဒါပေမယ့် မနေ့ က မလောင်ပဲ ကျန်နေခဲ့တဲ့ အပိုင်းတွေ ဒီနေ့ထပ်ပြီး မီးလောင်နေတယ် သိရပါတယ်။ လောက်စာကုန်မှ ငြိ်မ်းမယ့် မီးဆိုတာ မှန်နေပြီ ထင်ပါတယ်။ သတင်းတွေကို သိချင်တယ်ဆို နေးတစ်ဖိုရမ်မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Native Myanmar
Posted by Nay Nay Naing at 2/26/2008 04:12:00 PM0comments
Posted by Nay Nay Naing at 2/24/2008 05:29:00 PM0comments
Posted by Nay Nay Naing at 2/23/2008 12:12:00 AM0comments
The easiest ways to write in Burmese
မြန်မာစာ မရိုက်တတ်သူများအတွက် အသုံးဝင်မယ့် Link တွေ နဲ့ZawGyi Unicode မ ရှိသူတွေအတွက် အသုံးဝင်မယ့် Link တွေပါ။
Zawgyi-one Web Text Editor 1.5.4
Source code For Firefox is written by Ko Min Kyaw
Updated By Saturngod
ကွန်ပြူတာမှာ ဇော်ဂျီယူနီကုတ် မသွင်းထားချင်သူတွေ၊ မြန်မာလိုမရိုက်တတ်သူတွေ အတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Myanmar Key Map ကိုသုံးပြီး ရေးလို့ ရပါတယ်။ မနည်းနည်းတော့ ရေးရတာ ကြာမယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ Website တစ်ခုလို့အသုံးပြုသူတွေက ပြောပါတယ်။
Burglish WebText Editor
Burglish Code @ Google
ဒါကတော့ Burglish ( မြန်မာစာကို အသံထွက်အတိုင်း အင်္ဂလိပ်အက္ခရာတွေကိုသုံးပြီး ရေးတာပါ) ကို မြန်မာစာလုံး အဖြစ် ပြောင်းပေးတဲ့ ဆိုဒ်ပါ။ Top-Down List နဲ့ ပေါ်လာတဲ့အတွက် လွယ်ကူပါတယ်။ အဲ့ ကိုယ်ပေါင်းတာနဲ့သူတို့ ပေါင်းတဲ့ ပုံစံမတူရင်တော့ ခက်တာပေါ့။ Burglish ရေးပုံရေးနည်း Standard တစ်ခုမှ မရှိသေးတယ်။ အဲဒီမှာ ZawGyi Font တစ်ခုတည်းမကဘူး တခြား UniBurma, Myazedi, PadaukOT, Myanmar3 ကြိုက်တာကို ရွေးချယ်ရေး လို့ ရ ပါတယ်။
Win-2-Zawgyi Font (created by LilMaster)
Zawgyi-2-Win Font (edited by MgHla)
ဒါတွေကတော့ ZawGyi Font နဲ့ ရေးထားတဲ့ စာတွေကို Win Font ၊ Win Font နဲ့ ရေးသား ထားတာတွေကို ZawGyi Font ကို အလွယ်တကူပြောင်းနိုင်တဲ့ Links တွေပါ။ မြန်မာစာ ရိုက်တတ်သူတွေ အတွက်ပိုပြီး အသုံးဝင်ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ သုံးနေတဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ ယူနီကုတ် မသွင်းချင်တဲ့ အခါ၊ သွင်းလို့ မရတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ ရိုးရိုး Win Font နဲ့Microsoft Web ထဲမှာ စာရိုက်ပြီး Zawgyi Unicode ကို ပြောင်းဖို့အတွက် အဓိကသုံး ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး Gtalk သုံးနေတဲ့ အခါ Zawgyi Addin မသွင်းထားလို့တဖက်က ပို့ တဲ့ ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးထားတဲ့ မြန်မာစာလုံးတွေကို အမြင်ရပဲ လေးထောင့်အတုန်းတွေပဲ ပေါ်နေရင် အဲ့ဒီ Website တွေရဲ့ Text Area မှာ သွားထည့်ပြီး ဖတ်လို့ ရတယ်။ ကျွန်မ့ အလုပ်က ကွန်ပြူတာမှာဆို ZawGyi Gtalk Addin သွင်း မထားပါဘူး။ ဒီတော့ သူငယ်ချင်းတွေ ပို့ တဲ့ ZawGyi နဲ့ ရေးထားတဲ့ စာတွေကို အဲ့ဒီ ဆိုဒ်တွေကို သုံးပြီး ဖတ်လေ့ရှိတယ်။
Credit to Ko MgHla
Posted by Nay Nay Naing at 2/22/2008 10:32:00 PM4comments
Gtalk – Idle, Invisible and Multiple ID login
အရင်က Yahoo Messenger ကို အဓိကထားသုံးဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် Gtalk Messenger ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ Gtalk ကိုပဲ အဓိက သုံးဖြစ်နေခဲ့တယ်။ Gtalk က ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိတယ်၊ အသံကြည်တယ်၊ တခြား Fancy Features တွေ မပါဘူး။ သူ့ ရဲ့ Message Window က သေးသေးလေးဆိုတော့ အလုပ်မှာ သုံးရင်လည်း လူသိပ်မသိနိုင်တော့ သုံးရတာ အဆင်ပြေတယ်။ ကျွန်မနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတချို့ ကတော့ Yahoo နဲ့MSN ကိုပဲ အဓိကထားသုံးနေကြတုန်းပဲ။ ဒီတော့ သူတို့ တွေကို ပြောစရာရှိတဲ့အခါတွေမှာဆို သူတို့ ရှိမယ့် Messenger တွေ ကို ၀င်ရတော့တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကို ဘာလို့Gtalk မသုံးတာလဲလို့မေးလိုက်တော့ Gtalk မှာ တခြား Messager တွေမှာလို့စကားမပြောချင်တဲ့သူတွေကို မပြောပဲနေလို့ရအောင် Hide (invisible) လုပ်တဲ့ Feature နဲ့ကွန်ပြူတာနားမှာ မရှိဘူးဆိုတဲ့ Idle(Away) Status ပြောင်းထားလို့ ရတဲ့ Feature တွေ မပါဘူး။ ကိုယ်မပြောချင်လည်း လူမှု့ရေးတွေ၊ အားနာတာတွေ နဲ့ စကားပြန်ပြော နေရတာတွေ ရှိတယ်။ ဒါတွေကြောင့် မြန်မာပြည်ကလူတွေနဲ့ စကားပြောဖို့ ရှိမှသာ Gtalk ကို ၀င်တယ်တဲ့။ မဟုတ်ရင် ၀င်မထားဘူးတဲ့။
ဒါနဲ့Gtalk နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မ သိတာလေးတွေ သူငယ်ချင်းကို ပြောပြဖြစ်တယ်။ အခုအချိန်အထိတော့ Gtalk မှာ Idle Status ပြောင်းထားလို့ ရတာနဲ့Invisible လုပ်ထားတဲ့ Features တွေ Default အနေနဲ့မပါသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့လို လုပ်ချင်ရင် လုပ်လို့ ရတဲ့နည်းတွေရှိပါတယ်။ နည်းနည်းတော့ အလုပ်ပိုရှုပ်သွားတာပေါ့။
Idle (Away) လုပ်ဖို့ ကတော့ သိပ် မခက်ခဲပါဘူး။ အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ "gAlwaysIdle" ဆိုတဲ့ Software တစ်ခုကို သွင်းထားလိုက်တာပါပဲ။ အဲ့ဒီ Software လေးကို သွင်းလိုက်ရင် အခုလက်ရှိ ကျွန်မတို့သုံးနေတဲ့ Gtalk မှာပဲ Normal Idle , Always Idle နဲ့ Never Idle ဆိုပြီး Status လေးတွေရွေးဖို့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ Task Bar ပေါ်က Gtalk Icon မှာ Right Click လုပ်ကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ မှာပါ။ ကိုယ်အလိုရှိတဲ့ Status ကို ရွေးပြီး သုံးလို့ ရပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက Always Idle Status ကို ရွေးထားပေမယ့် တစ်ယောက်ယောက်နဲ့စကားပြောနေတဲ့အချိန် (voice chat) ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ Status က Available အခြေအနေကိုပဲ ပြနေပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ခြား တစ်နည်းကတော့ Gtalk Messenger မသုံးပဲ Multi-protocol instant messaging Software တွေ ဖြစ်တဲ့ Pidgin (Gaim), iChat, Miranda, Psi and Trillian Pro စတာတွေကို Login ၀င်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Status ကိုပြောင်းထားတာပါ။ ဒီနည်းကိုသုံးရင်တော့ Voice Chat လုပ်လို့ မရပါဘူး။ Gtalk Messenger ကို သုံးမှသာ Voice Chat Feature ကို သုံးလို့ ရနိုင်ပါတယ်။
Hide (Invisible) လုပ်ဖို့အတွက်တော့ ကျွန်မသိသလောက်ဆိုရင် အခုအချိန်အထိ ရိုးရိုး Gtalk Messenger ကိုသုံးပြီး Login ၀င်ထားတဲ့ အခါတွေမှာဆို လုပ်လို့မရပါဘူး။ တခြား Multi-protocol IM တွေသုံးပြီး လုပ်ရင်တော့ ရပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရှာတွေ့ တဲ့ နည်း တစ်ခုကတော့ PSI ကို သုံးပြီး လုပ်တာပါ။ ကျွန်မကတော့ အဲ့ဒီနည်းကို တစ်ခါမှ စမ်းမကြည့်ဖူးဘူး။ အဲ့လောက် အလုပ်ရှုပ်မခံချင်တာလည်း ပါတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဝင်စားသူတွေ စမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆို ဒီအောက်က Video နဲ့Instruction တွေကို ကြည့်ပြီး လိုက်လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
How to stay Invisible in Gtalk - Video Instruction
How to stay Invisible in Gtalk - List of Instructions
Mutiple ID Login လုပ်တာက အတော်လေးလွယ် ပါတယ်။ အတော်များများလည်း သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာ တစ်ခုတည်းကနေ ရိုးရိုး Gtalk Messenger ကိုသုံးပြီးပဲ User အများကြီးဝင်လို့ ရအောင် ဆိုရင်
- ပထမဆုံး Gtalk Shortcut ကို Desktop ပေါ်မှာ ထားရပါမယ်။
- အဲ့ဒီ Gtalk Shortcut Icon ပေါ်မှာ Right Click လုပ်ပြီး Properties ကိုရွေးပြီးရင် Shotcut Tap က Target မှာ ပြနေတဲ့ GoogleTalk exe ရှိနေတဲ့ line ရဲ့နောက်မှာ /nomutex ဆိုတာလေးကို ထည့်လိုက်ပြီး Save လုပ်လိုက်ရင် ရသွားပြီ။
Gtalk ကို တခြား ID တစ်ခုနဲ့ဝင်ချင်တိုင်း Desktop ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ Gtalk Shortcut ကို click လုပ်လိုက်။ နောက် Gtalk Window တစ်ခုပေါ်လာမယ်။ ဒါဆို ကွန်ပြူတာတစ်ခုတည်းကိုသုံးပြီး အလကားရတိုင်း ဖွင့်ထားသမျှ Gtalk Account အကုန်လုံးနဲ့တစ်ပြိုင်နက် Login ၀င်လို့ ရသွားတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 2/22/2008 11:45:00 AM2comments
BurmeseClassic - 2nd Annual Special
Burmeseclassic မှာ ၂ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လယ် အထူအစီအစဉ်အနေနဲ့နာမည်ကြီး မြန်မာရုပ်ရှင် ကားဟောင်းတွေကို အားလုံးကြည့်ရှု့ နိုင်အောင် တင်ထားပေးတာကို တွေ့ ရပါတယ်။
Burmeseclassic - Movie
ဘယ်သူပြိုင်လို့ လှပါတော့နိုင် ( ဇော်ဝမ်း၊ ၀င်းလှိုင်၊ အံ့ကျော်၊ တင်တင်ညို၊ တင်တင်လှ)
မောင်တို့ ချယ်ရီမြေ ( ၀င်းဦး၊ခင်သန်းနု )
ကျွန်တော်က ခန့် ချော ( ကျော်ဟိန်း၊ ခင်သီတာထွန်း )
ပန်းမြို့တော်သို့ခြေလှမ်းသုံးဆယ် ( ၀င်းဦး၊ ကျော်စွာဝင်း၊ ချိုပြုံး)
မလိခချစ်သူ ( မြတ်လေး၊ ကောလိပ်ဂျင်နေ၀င်း၊ ခင်ယုမေ)
နေခြည်ဖြာမှ နွေးသောကြောင့် ( အောင်လွင်၊ နွဲ့ နွဲ့ မူ)
နုနုငယ်ငယ် ( ကျော်ဟိန်း၊ စန္ဒာ၊ ကြည်ကြည်ဌေး၊ ဦးကျောက်လုံး၊ ၀င်းညွှန့် )
ချစ်တဲ့သူငယ်လေ ( မောင်ရူပ၊ မေ၀င်းမောင် )
ချစ်ခြင်းဆိုသည်ဘာလဲကွယ် ( နေအောင်၊ တင်တင်ညို)
ချစ်သူငယ်ချင်း ( ကျော်ဟိန်း၊ ခင်သီတာထွန်း၊ နွဲ့ နွဲ့ မူ)
ဆောင်းတည၀ယ် (၀င်းဦး၊ ၀ါဝါ၀င်းရွှေ၊ ဂျော်လီဆွေ )
နွေရူပ (ဇော်ဝမ်း၊ ခင်သီတာထွန်း)
Burmeseclassic က တင်ပေးထားတဲ့ ဇာတ်ကားတွေထဲက တချို့ ရုပ်ရှင်ကားတွေကို မြန်မာအသံက ပြန်လွှင့်ပေးလို့ကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်။ တချို့ ရုပ်ရှင်တွေကိုတော့ နာမည်ကြားဖူး ယုံလောက်ပဲရှိပြီး၊ တချို့ ရုပ်ရှင်ကားနာမည်တွေကိုတော့ ကြားတောင် မကြားဖူးဘူး။ ဒီတစ်ပတ် စနေ၊တနင်္ဂနွေ အားလပ်ရက် ရောက်ရင်တော့ အဲ့ဒီက မြန်မာရုပ်ရှင်ကားဟောင်းတွေကို ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်အုံးမယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 2/20/2008 05:30:00 PM4comments
Posted by Nay Nay Naing at 2/19/2008 09:14:00 PM0comments
အော်ပီကျယ် - မဆို မမိန့်နဲ့ကျကျမ်း
ဒီကာတွန်းကိုတော့ အတော်များများ ဖတ်ဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မဖတ်ရသေးသူတွေ ဖတ်နိုင်အောင် ပြန်တင်ထားလိုက်တယ်။ နောက်တစ်ချိန် ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်ဖတ်ကြည့်ချင်စိတ်ပေါ်တဲ့ အခါမှာလည်း ပြန်ရှာရလွယ်သွားတာပေါ့။
မဆို မမိန့် 
ပညာရှိ အဆိုအမိန့်များနဲ့ သွေဖည်တတ်တဲ့ လူ့စရိုက်ကို ကာတွန်းရေးပါတယ်။
တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းကို ညွှန်ပြတာက 'တက်ကျမ်း'
အဲဒါနဲ့ ပြောင်းပြန်က 'ကျကျမ်း'
Credit to May11 and KhungMoung
Labels: Book, Cartoons, Funny, Myanmar
Posted by Nay Nay Naing at 2/18/2008 05:51:00 PM2comments
ဘယ်လိုဖြစ်သလဲ မသိဘူး၊ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်ဆို တစ်ခြား အလုပ်ကိစ္စတွေ ပေါ်လာတယ်။ ဘယ်တော့မှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိဘူး။ လုပ်ရမယ့် အချိန်တွေကလည်း ကွက်တိနည်းပါးကို ဖြစ်နေတယ်။ ဘာလုပ်ရမယ် မှန်းမသိတော့ဘူး။ ပြောသာ ပြောတာပါ။ ကိုယ်အကောင်းဆုံးလို့ထင်တာကို ဆုံးဖြတ်ပြီး လုပ်ကိုင်မိသွားမှာပါပဲ။ တစ်ခုခုကို မဆုံးဖြတ်ပဲ ရပ်နေလို့ မှ မရတာ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်ဟာကို ဦးစားပေး လုပ်ကိုင်ရမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားရတာနဲ့ဒီရက်ပိုင်းမှာ ခေါင်းပိုရှုပ်အုံးတော့မယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာတော့ အားလုံး အစီအစဉ်တကျနဲ့အဆင်ပြေသွားမယ် ယုံကြည်ပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 2/18/2008 05:46:00 PM0comments
World Famous Arches
စင်္ကာပူနိုင်ငံသား သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပို့ ပေးတာ။ ရယ်ရတယ်။ နောက်ဆုံးပိတ် စင်္ကာပူရဲ့ World Famous Arches ကိုကြည့်။ သိပ်မှန်တာပဲတဲ့။
Electronic Road Pricing (ERP) is an electronic system of road pricing based onapay-as-you-use principle. It is designed to beafair system as motorists are charged when they use the road during peak hours.(Source: Singapore's Land Transport Authority)
Posted by Nay Nay Naing at 2/18/2008 10:37:00 AM2comments
စကားလုံးတွေရဲ့ အရေးပါမှု့ ကို ပိုပြီး သိလာရတဲ့အခါ...
အပြောမတတ်လို့ဖြစ်လာရတဲ့ ပြဿနာတွေကို ကြုံတွေ့ ၊ မြင်ရဖန်များလာရတဲ့ အခါ...
စကားတစ်ခွန်းကို လွယ်လွယ်နဲ့ပြောမထွက်တော့ဘူး...
စိတ်ကူးထဲမှာ စကားတွေပေါ်လာတိုင်း အပြင်မှာ ပြောသင့်၊ မပြောသင့် တွေးတော စဉ်းစားရင်းနဲ့စကားသံတွေ ခြောက်ခမ်းကုန်ရတယ်..
Posted by Nay Nay Naing at 2/18/2008 09:43:00 AM4comments
အော်ပီကျယ် - သူ / သူမ
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် အီးမေးက တဆင့် ပို့ ပေးတဲ့ အော်ပီကျယ်ရဲ့ ကာတွန်းတွေပါ။ ကာတွန်း နာမည်က သူ နဲ့သူမ တဲ့။ သူ/ သူမ .. မတူညီတဲ့ တွေးခေါ်၊ ခံစား၊ ယူဆ၊ နေထိုင်၊ လုပ်ကိုင်ပုံတွေကို အော်ပီကျယ်က ဒီလို " ဗေဒင်မေးခြင်း၊ ပြောဆိုခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်း၊ ထိုင်ခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်း၊ လျှောက်ခြင်း၊ မှတ်ခြင်း၊ နားဆင်ခြင်း၊ စွဲငင်ခြင်း " ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ် ၉ ခုနဲ့ကာတွန်း ရေးတယ်။ အမှန်တရားတွေလား။ သူရေးထားတာကို ဖတ်ပြီး ရယ်မောမိလို့ထပ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ လိုက်တာပါ။ အားလုံး ပျော်ရွှင်ရယ်မောနိုင်ကြပါစေ။
သူ ဆိုတာ ကျား
သူမ ဆိုတာ မ
ကျား နဲ့မ တွေးမြင်ပုံ မတူဘူး။
ဒါကို "သူ / သူမ" ကာတွန်းရေးတယ်။
All credit go to original uploader fineleaf and Ko PN
Labels: Cartoons, Fun, Myanmar
Posted by Nay Nay Naing at 2/14/2008 01:56:00 PM3comments
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ဟာ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ ပါ။
Posted by Nay Nay Naing at 2/13/2008 02:39:00 PM0comments
အဆုံးအဖြတ်တိုက်ပွဲ (သို့ ) အဆိုးဆုံး လာပြီ
စစ်အစိုးရ က စ်ိန်ခေါ် ပြီ ။ 1990 ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုတရားဝင်ပစ်ပယ်ဖို့လုပ်ပြီ။ ဒါတတိုင်းပြည်လုံးလူထုရဲ့ ဆန္ဒကို တရားဝင် ဗြောင်စော်ကားတာဘဲ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ကြည်ဆွေးနွေးပွဲဟာလဲ နိတ္ထိတန်ပြီလို့ ပြောလိုက်တာဘဲ။ အဲ့ဒီတော့ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတရပ်လုံး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ NLD နဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီ အားလုံးအတွက် အဆုံးအဖြတ်တိုက်ပွဲဟာ ၂၀၀၈ မေမှာ စတင်ပြီး ၂၀၁၀ ထက် ကျော်စရာမရှိတော့ဘူး......
အကောင်းဆုံးကို နှစ် နှစ်ဆယ်နီးပါး မျှော်လင့်ခဲ့ကြပြီးပြီ.....
အဆိုးဆုံးကို ပြင်ဆင်ကြသည့် အနေဖြင့်
အနီးကပ်ဆုံးရန်သူကိုရှာပြီး တိုက်ဖို့ အမြန်ဆုံး ပြင်ဆင်ကြတော့.....
This will be the critical turning point in Burma history. So it is very important for all the Burmese people to participate in changing the history of our country. We are self-determined. We have to choose democracy or dictatorship system for our country. If we do believe in freedom and democracy, we all have to raise our voice for the future of our young generations, we all have to show our courage again how much we love freedom, we all have to be organized again and worked together again like it never ever has been in the history of Burma before ...
Posted by Thiha Kyaw Zaw at 2/10/2008 04:02:00 PM2comments
Myanmar Announces to hold A General Election In 2010
အပေါ်ကဟာက မြန်မာပြည်မှာ အခုလက်ရှိ တစ်ခုတည်းသော အင်္ဂလိပ်လို တရာဝင်ထုတ်ဝေတဲ့ New Light Of Myanmar သတင်းစာမှာ ပါတဲ့ မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက် ခေါင်းစဉ်။ ဒီအောက်က ဟာတွေကတော့ မြန်မာအလင်းသတင်းစာ ၁၃၆၉ ခုနှစ်၊ တပို့ တွဲလဆန်း ၄ ရက်နေ့ ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ ၊ အတွဲ(၄၇)၊ အမှတ် (၁၄၄) ရှေ့ ဖုံး နဲ့နောက်ကျောဖုံးမှာ ပါလာတဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေ။ မနေ့ ညက အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဖတ်ရတဲ့ သတင်းတွေအရ ဒီနေ့ မှာတော့ မဖတ်တာကြာ နေပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာသတင်းစာတွေကို လိုက်ဖတ်ရင်း တွေ့ တာလေးတွေကို မှတ်ထားလိုက်တာပါ။ ဟိုတစ်ခါက လုပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲက အနှစ် ၂၀ ကြာတယ်၊ ရရှိတဲ့ အဖြေအတိုင်း အကောင်အထည် မဖော်ခဲ့ဘူး။ ဒါကိုလည်း ဒီအတိုင်းပဲ ငြိမ်နေခဲ့ကြတယ်။ ဒီတစ်ခါရော...
Posted by Nay Nay Naing at 2/10/2008 03:20:00 PM0comments
မနေ့ ညနေပိုင်းက City Hall သွားရင် လမ်းပြကြယ်စာကြည့်တိုက်ကို ရောက်လို့သီးလေးသီး အခွေနဲ့TP မြန်မာသင်္ကြန်အခွေ ၀ယ်ဖြစ်တယ်။
သီးလေးသီး ဆေးရောင်စုံ(စင်္ကာပူ) အငြိမ့်ခွေ
စင်္ကာပူမှာ သီလေးသီး အငြိမ့် လာကတုန်းက နေလို့ မကောင်းတာနဲ့ သွားမကြည့်ဖြစ်ဘူး။ တကယ်တော့ အခွေလည်း ၀ယ်ဖို့စိတ်ကူးလည်း မရှိပါဘူး။ တကယ်ဆို အင်တာနက်ပေါ်မှာ ကြည့်လို့ ရမှာပဲလေ။ ပထမဆုံး သူငယ်ချင်းက သီးလေးသီး အခွေဝယ်အုံးလေလို့ပြောတော့ မ၀ယ်ပါဘူးလို့ပြန်ပြောဖြစ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် sample ပြထားတဲ့ အခွေကို ယူကြည့်ရင်း အခွေကာဗာပေါ်က မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး (စင်္ကာပူ)မှ ဖြန့် ချီသည် ဆိုတဲ့ စာသားကိုတွေ့ တာနဲ့အခွေကို ၀ယ်ဖြစ်သွားတယ်။ အခွေ တန်ဖိုးက S$10 ထဲပဲရှိပါတယ်။ ဒီပိုက်ဆံဟာ ကိုယ့်အတွက်ဆို ဘာမှ မဟုတ်လောက်တဲ့ ပိုက်ဆံပမာဏ ပါပဲ။ မူရင်းကို ၀ယ်ပြီး အားပေးလိုက်တာ တစ်တပ်တစ်အား ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ကူညီရာ ရောက်သွားမယ်လို့ထင်မိတယ်။ ၀ယ်ယူအားပေးချင်တယ်ဆိုရင် လမ်းပြကြယ် စာကြည့်တိုက်မှာ ၀ယ်လို့ ရပါတယ်။
TP Myanmar Thingyan Collection's Edition 1999-2007
TP သင်္ကြန်ခွေကတော့ သူငယ်ချင်းအတင်းဝယ်ခိုင်းလို့ ဝယ်ရတယ်။ ဈေးက S$ 25 ဆိုတော့ ၀ယ်ဖို့နောက်တွန့်သွားတယ်။ အထဲမှာ DVD7ချပ်ပါတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအခွေရောင်းသူ သူငယ်ချင်းက ၀ယ်မယ်ဆို အကြွေးနဲ့ရောင်းမယ်၊ နောက်မှ ပိုက်ဆံပေးလို့ပြောလာတယ်လေ။ :D သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း ဒီလောက်တော့ အားပေးကူညီရမယ် မဟုတ်လား။ ဒီတော့ တွေ့ တိုင်းတောင်းသာတောင်းတော့၊ ဘယ်တော့ မှ အကြွေးပေးမယ် မပြောနိုင်ဘူး ပြောပြီး TP သင်္ကြန်အခွေကို ယူလာလိုက် ပါတယ်။
လမ်းပြကြယ် စာကြည့်တိုက်မှာ စာအုပ်အသစ်တွေရောက်နေတယ်။ အလှူရှင်တွေ လှူထားတာတွေနဲ့စာကြည့်တိုက် ရန်ပုံငွေတွေနဲ့ဝယ်ယူထားတာတွေပါ။ အသစ်ရောက်နေတဲ့ စာအုပ်တွေထဲက ကဗျာဆရာ (ဦး)တင်မိုး ကွယ်လွန်ခြင်း ၁လပြည့် ထုတ်ဝေတဲ့ ဖလ်မီးအိမ်သို့ အလွမ်းစာ စာအုပ်ရယ်၊ ဆရာမောင်သာနိုး ရေးတဲ့ ထင်းရှူးပင်ရိပ် နဲ့တော်မှော်ရုံလမ်း စာအုပ်တွေနဲ့မိုးမိုး(အင်းလျား)ရေးတဲ့ ပွင့်တချို့ကြွေတချို့ဆိုတဲ့ စာအုပ် ငှါးလာတယ်။ ဒီတစ်ပတ်တော့ အလုပ်သွားအလုပ်ပြန် ဖတ်စရာ စာအုပ်တွေရှိသွားပြီ။
လမ်းပြကြယ်မှာ ၆ လစာအတွက် အသင်းဝင်ကြေး S$10 နဲ့တစ်ခါငှါး နှစ်အုပ်ငှါးခွင့်ရှိ တယ်။ တစ်ခါငှါးရင် ၂ ပတ်အထိ ယူထားခွင့်ရှိတယ်။ ကျွန်မက တစ်ပတ်တစ်ခါ၊ တစ်ခါတလေ တစ်ပတ် ၂ခါ (ဗုဒ္ဓဟူး နဲ့စနေ/တနင်္ဂနွေ) မှာ စာအုပ် အသစ်ငှါးလေ့ရှိတော့ အဲ့ဒီမှာ ရှိတဲ့ ကျွန်မ ဖတ်လေ့ရှိတဲ့ စာအုပ် အမျိုးအစားတွေမှာ ဖတ်လို့ကုန်လုနီးပါး ရှိနေပြီ။ အခုလို စာအုပ်အသစ်တွေ ရောက်နေတွေ့ ရတော့ တကယ့်ကို ၀မ်းသာ သွားတယ်။ တစ်ခါမှ မဖတ်ရသေးတာတွေရော၊ ဖတ်ခဲ့ဖူးပေမယ့် ပြန်ဖတ်ချင်နေတဲ့ စာအုပ် အတော်များများကိုလည်းတွေ့ လိုက်ရတယ်လေ။ စာအုပ်အလှူရှင်တွေနဲ့လမ်းပြကြယ် စာကြည့်တိုက် ဆက်လက်တည်တံ့အောင် လုပ်ဆောင်နေသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 2/10/2008 01:32:00 PM0comments
လမ်းရွေးခွင့် - ဇော်ဝင်းထွဋ်
အတူလျှောက်ဖို့တို့ လမ်းကို တို့ ရွေးခွင့်ရပါ့အုံးမလား
ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ချက်တို့ကိုယ်ဆီနဲ့ လေ
ကိုယ့်ရဲ့ ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးသွားချင်တဲ့သူ
ရင်မှာ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ဒီအချစ်လမ်းဆီ
နယ်ကျွံ့ လာမှ နောက်လှည့် မပြန်ချင်ဘူး...
အချစ်စစ်ရဲ့ လမ်းများဟာလေ... ထာဝစဉ် မဖြောင့်ဖြူးဘူး...
တို့ ရှေ့ ဆက်ရဖို့ အပြင် ဘယ်လမ်းမှ မမြင်တော့ဘူး...
ရှေ့ ဆက်လျှောက်လိုက်စမ်းပါ တို့ လမ်းကို တို့ ရွေးချယ်နိုင်မလား ...
တို့နှစ်ယောက်လုံးကို နောက်ဆုံး ကံကြမ္မာကပဲ ရွေးချယ်သွား မလား..
ကိုယ်လေ အချိန်တွေ ဖြုန်းမိနေရင် Sorry..
ဒါဆို ကိုယ်ဟာ မင်းအတွက် ပုံပြောသူ ...
အရာရာ အနယ်ထိုင်သွားမယ့် တစ်ချိန်ချိန် တစ်နေ့ မှာ
ဝေဒနာတွေက အကောင်းဆုံး ပြက်လုံး တစ်ခု
လမ်းပြမရှိတဲ့ လူ့ ဘ၀ဟာ မြေပုံ မပါသောလမ်း
မင်းနဲ့ တို့ ရဲ့ စိတ်ကြိုက်လမ်းရွေးမှာလား ..
ရှေ့ ဆက်လျှောက် .....
ဘယ်အခြေအနေ .. ဘယ်အချိန်ဆို.. ဘယ်စီ ဘယ်မှာလည်း တို့ မသိ...
မရေရာတယ်.. မသေချာတယ်.. မမြင်နိုင်တဲ့ လမ်းများ
တို့ လမ်းကို တို့ ရွေးချယ်နိုင်မလား ...
တို့နှစ်ယောက်လုံးကို နောက်ဆုံး ကံကြမ္မာကပဲ ရွေးချယ်သွားမလား.
Posted by Nay Nay Naing at 2/09/2008 11:35:00 PM2comments
Gtalk freezes With Show Music Status using Winamp 5.5
ဟိုရက်ပိုင်းက ကျွန်မရဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ Winamp5နဲ့Gtalk ကို အတူသုံးရင် ပြဿနာ တတ်နေတယ်။ Gtalk ၀င်ထားတဲ့ အချိန် Winamp ကို ဖွင့်မိလိုက်ရင် Gtalk freezes ဖြစ်သွားတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မက သီချင်းတွေ နားထောင်တဲ့အခါ Winamp ကိုသုံးပြီး နားထောင်ရတာထက်စာရင် iTunes ကို သုံးပြီး နားထောက်ရတာကို ပိုပြီး အသံကြည်တယ်၊ ပိုပြီးသဘောကျတာနဲ့ Winamp မသုံးလည်း ကိစ္စမရှိဘူးဆိုပြီး Winamp မသုံးပဲ iTunes ပဲ သုံးနေလိုက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်၊ ဘယ်လို ရှင်းရမယ် ဆိုတာတွေ ရှာရမှာ ပျင်းတာနဲ့အလွယ်ဆုံး နည်းကို သုံးပြီး ရှင်းလိုက်တာပါ။ :D
ဒီနေ့့ Save Window XP! ပိုစ့်မှာ မျိုးကျော်ထွန်း ရေးထားခဲ့တဲ့ ကွန်မန့် က နည်းကို အသုံးပြုပြီး ရှင်းလိုက်တော့ အခု အဆင်ပြေသွားပါပြီ။ တခြားသူတွေ အဲ့ဒီလို ပြဿနာတတ်နေရင် ရှင်းလို့ ရအောင် Solution ကို ပြန်ရေး လိုက်ပါတယ်။
Google Talk freezes with show music status using winamp 5.5
Step 1: Go to the root directory of Winamp which is usually in C:\_Program Files\_Winamp\_
Step 2: Select Tools->Folder Options->View (Tab) and uncheck the hide extensions for known file types and click Ok.
Step 3: Now create an empty file (Right click the mouse -> New -> Text document), so the default file would be like “New Text Document.txt”.
Step4: Rename the above file to “winamp.m3u” and save.
Step5: Close Winamp and Google Talk. Now open again and Your Show Current music track status should work likeacharm
Credit to MyoKyawHtun
Posted by Nay Nay Naing at 2/09/2008 12:50:00 PM4comments
Microsoft will end OEM and shrink-wrapped sales of Windows XP on June 30, 2008, forcing users to shift to Vista.Millions of us have grown comfortable with XP and don't seeaneed to change to Vista. [more here.....]
The costs are too high and the benefits too low to be forced to switch to Vista [more here...]
တကယ်ဆို Window XP က အခု လက်ရှိ Window Vista နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် အများကြီး Stable ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မ အိမ်မှာ Widnow XP ကို တစ်ပတ်လောက် မပိတ်ပဲ ဖွင့်ထားလို့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ အတော်လေး ငြိမ်တယ်ဆိုရမယ်။ ဒါပေမယ့် Widnow Vista ကို ၁ ရက်လောက် မပိတ်ပဲ ဖွင့်ထားလိုက်ရင် အရမ်းလေးပြီး သုံးရတာ အဆင်မပြေတော့ဘူး။ တစ်နေ့တစ်ခါ လောက်တော့ အနည်းဆုံး restart လုပ်ပေးရတယ်။ နောက်ပြီး အခုအချိန်အထိ Window Vista ကို Applications တိုင်း က Support မလုပ်သေးပါဘူး။ Window Vista မှာ တခြား ပြဿနာတွေလည်း အများကြီးရှိသေးတယ်။ တခြားဟာ တွေထားပါ။ ဒီရက်ပိုင်း ကျွန်မရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သုံးနေတဲ့ Window Vista သွင်းထားတဲ့ Laptop အချို့ မှာ Audio နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတတ်တာ တွေ့ နေရတယ်။ Audio သုံးထားတဲ့ Software တစ်ခုကို ဖွင့်ထားတုန်း နောက်တစ်ခုကို ထပ်ဖွင့်လို့မရဘူး။ Gtalk ကိုသုံးပြီး စကားပြောနေတုန်း၊ သီချင်း နားထောင်လိုက်ရင် ဒါမှမဟုတ် တခြား အသံနဲ့ ဆိုင်တဲ့ Applications တစ်ခုဖွင့်လိုက်ရင် Applications နှစ်ခုလုံး Hang သွားပါတယ်။ ဒါဆို တခြား Audio နဲ့ပတ်သက်တာတွေ ဘာမှ ဖွင့်လို့မရတော့ဘူး။ နောက်ဆုံး Computer ကို Restart လုပ်လိုက်မှသာ အဲ့ဒီ Application တွေ ပြန်သုံးလို့ရတော့တယ်။ အဲ့ဒါလို ဟာလေးတွေကအစ အဆင်မပြေ တဲ့ Vista ကို ကျွန်မတော့ အခုအချိန်မှာ သုံးဖို့ready မဖြစ်သေးပဲ Window XP ကိုပဲ ဆက်လက် သုံးစွဲနေအုံးမှာပါ။
Posted by Nay Nay Naing at 2/08/2008 04:20:00 PM6comments
2006 Myanmar Academy
၂၀၀၆ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုတွေကို သရဖူ မဂ္ဂဇင်း Website မှာ Live ရေးပေးနေတဲ့ အတွက် သိလိုက်ရပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆု၊ ဒါရိုက်တာဆု၊ အမျိုးသာဇာတ်ပို့ ဆု ၊ ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု တွေ ရသွားတဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းများစွာဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားဟာ အေအိုင်ဒီအက် ပညာပေး ဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်ထားသူတွေ အားလုံးဟာ ပိုက်ဆံမယူပဲ အခမဲ့ ၀င်ရောက်ကူညီထားလို့Planet Website မှာ ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်။
Tharahpu Magazine -2006 Myanmar Academy Live
ဇာတ်ကားဆု - မျှော်လင့်ခြင်းများစွာ
ဒါရိုက်တာ ဆု - မောင်မျိုးမင်း (ရင်တွင်းဖြစ်) (မျှော်လင့်ခြင်းများစွာ)
အမျိုးသားသရုပ်ဆောင် ဆု - ရန်အောင် (ဂုဏ်ရှိန်ပြင်းတဲ့ ချစ်ခြင်းသိက္ခာ)
အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ဆု - နန္ဒာလှိုင် (တောင်သမန်သစ္စာ)
အမျိုးသား ဇာတ်ပို့ ဆု - ဖိုးကျော် (မျှော်လင့်ခြင်းများစွာ)
အမျိုးသမီး ဇာတ်ပို့ ဆု - မေသဉ္စာဦး ( ပန်းပျိုးသူတို့အလင်္ကာ)
ရုပ်ရှင် ဇာတ်ညွှန်း ဆု - ဇော်မြင့်ဦး ( တော်သမန်သစ္စာ)
ရုပ်ရှင် တည်းဖြတ် ဆု -ဇော်မင်း ဟံသာမြေ (မျှော်လင့်ခြင်းများစွာ)
ရုပ်ရှင် ဂီတထူချွန် ဆု - ကိုသော်ဇင် လ၀န်းအိမ် မန္တလေး ( ပန်းပျိုးသူတို့အလင်္ကာ)
ရုပ်ရှင် အသံ ဆု -ဦးမျိုးညွှန့်(တောင်သမန်သစ္စာ)
ရုပ်ရှင် ဓာတ်ပုံ ဆု - သန်းညွန့်ပန်းသာ ( ပန်းပျိုးသူတို့အလင်္ကာ)
၂၀၀၆ တစ်နှစ်လုံးမှာမှ မြန်မာရုပ်ရှင် ၁၁ ကားထည်းသာ ရုံတင်ပြသနိုင်ပြီး အဲ့ဒီထဲက ရွှေးချယ်ပြီး အခုလို ဆုတွေကို ပေးတာ ဖြစ်ကြောင်း Planet မှာ ရေးထားလို့ သိလိုက်ရတယ်။ အဲ့ဒီ ရုပ်ရှင် ၁၁ ကား အကြောင်း နဲ့ဘယ်သူတွေ သရုပ်ဆောင်ထားတာလည်း ဆိုတာကို သိချင်တယ်ဆိုရင် Planet မှာ သွားဖတ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
Planet - ၂၀၀၆ ခုနှစ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား စာရင်းများ နှင့် ဓာတ်ပုံများ
ဒီနေ့ တော့ မနေ့ ည မြန်မာရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲက ပုံတွေကို ပေါ်ပြူလာ ဂျာနယ်ဆိုဒ်မှာ တင်ထားတာတွေ့ရတယ်။
[More Photo at PopularJournal -2006 Academy Views]
[More Photo at Planet- Academy]
Photo Credit to Popular Journal
Source : Planet.com.mm , TharahpuMag.com
Posted by Nay Nay Naing at 2/08/2008 12:01:00 AM0comments
လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော် အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပါစေ။
Posted by Nay Nay Naing at 2/06/2008 05:14:00 PM2comments
Posted by Nay Nay Naing at 2/05/2008 09:14:00 PM0comments
ဒီရက်ပိုင်း ကျန်းမာရေး မကောင်းဘူး။
ဖျားတာတော့လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒီရက်ပိုင်းနေ့ တိုင်းနီးပါး ခေါင်းကိုက်တယ်။ နောက်ပြီး ချောင်းအရမ်း ဆိုးနေတယ်။
ခုအချိန်များ ဆေးခန်းသွားရင် ဆရာဝန်က ဆေးခွင့်ပေးမှာ သေချာတယ်။ ဒါပေမယ့် ခွင့်ယူလို့မရဘူး။
အလုပ်မှာ တရုတ်နှစ်ကူး ပြည်တော်ပြန်ဖို့ခွင့်ယူသူတွေများလို့ကျန်တဲ့သူတွေကို ခွင့်မယူပါနဲ့ လို့ပြောထားတယ်။
ဒီနေ့ အလုပ် အရမ်းများတယ်။ ၁၂ နာရီမှ စားနေကျ နေ့ လယ်စာတောင် ၂ နာရီလောက်မှ သွားစားရတယ်။
အားတဲ့အချိန်လေး စာဖတ်မယ် ဆိုတော့ သုံးနေကြ Proxy down နေလို့အလုပ်က Proxy ကိုပဲသုံးလို့ ရတယ်။
အလုပ်က Proxy နဲ့ ဆို ဆိုဒ်တော်တော်များများကို ၀င်မရဘူး။ Logs တွေ အမြဲကြည့်နေတာမျိုးဆိုတော့ သုံးရတာ အဆင်မပြေဘူး။
ဒီရက်ပိုင်းတော့ Diary လိုလိုရေးတာတွေ ကလွဲရင် တခြားဟာတွေ ရေးနိုင်မယ် မထင်ဘူး။
၂ ရက် နဲ့နေ့ တစ်ဝက်တော့ အောင့်အီးပြီး အလုပ်ကိုပဲ အာရုံစိုက် လုပ်လိုက်ပါအုံးမယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 2/04/2008 05:35:00 PM 1 comments
အား... အလုပ်လုပ်ရတာ စိတ်မပါဘူး။ ပင်ပန်းနေတယ်။ နားချင်ပြီ။ မနေ့ ကမှ Deployment လုပ်ထားတာ ဆိုတော့ ဒီနေ့အလုပ်လုပ်စရာ သိပ်မရှိပါဘူး။ Production မှာ အားလုံး အဆင်ပြေနေတယ်။ နောက်တစ်ပတ် ခွင့်သွားမယ့် သူတွေစီက အလုပ်တွေ လွှဲယူဖို့ ရှိတာကြောင့်သာ အလုပ်လာရတာ။ မဟုတ်ရင် ဒီနေ့အလုပ် လာဖြစ်မယ် မထင်ဘူး။ သောကြာနေမို့ခွင့်မယူချင်တာလည်း ပါတယ်။ နောက်တစ်ပတ် တရုတ်နှစ်ကူး ဆိုတော့ အလုပ်က တရုတ်တွေ ခွင့်ယူပြီး သူတို့နိုင်ငံတွေ ပြန်ကြမယ်။ ထမင်းအတူသွားစားလေ့ရှိတဲ့ လူ ၆ ယောက်မှာ ၄ ယောက်က ခွင့်ယူတယ်။ ကျွန်မကလွဲရင် သူတို့ အားလုံးက တရုတ်တွေကြီးပဲ။ မလေး တရုတ်၊ အင်ဒိုနီးရှား တရုတ်၊ ဗီယက်နမ် တရုတ်၊ ဖိလစ်ပင်း တရုတ်၊ ပြည်မကြီးက တရုတ်နဲ့စင်္ကာပူရီးယမ်း တရုတ်။ နောက်တစ်ပတ်မှာ ဒီနိုင်ငံက တရုတ်တချို့ လည်း ခွင့်ယူတာတွေ့ တယ်။ ထူထူးခြားခြား အဖွဲ့ ထဲက ကုလားတစ်ယောက်လည်း ခွင့်ယူတယ်။ သူကတော့ နှစ်ကူးဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အားလပ်ရင်မှာ ဆက်တိုက် နားချင်လို့ နဲ့တူပါတယ်။ ခွင့်ယူတဲ့သူတွေ များတော့ ဒီနေ့လွှဲစရာရှိတာတွေ အကုန် လွှဲယူထားမှ နောက်တစ်ပတ် အလုပ်လုပ်ရတာ အဆင်ပြေမှာလေ။ တစ်ခုခု ပြဿနာ တက်ရင် ကူညီရှင်းပေးမယ့်သူ ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။
ဒါနဲ့ခုနကလေးပဲ HR က အီးမေးပို့ တယ်။ ၆ ရက် နေ့ မှာ နေ့ လယ် ၁ နာရီအထိပဲ အလုပ်လုပ်ရမယ်တဲ့။ ကောင်းပါတယ်။ ၇-၈ က တရုတ်နှစ်ကူးဆိုတော့ ဒီနိုင်ငံရဲ့ အားလပ်ရက်၊ အလုပ်ပိတ်တယ်။ ၉-၁၀ က စနေ နဲ့တနင်္ဂနွေ၊ အလုပ်သွားစရာ မလိုဘူး။ ဒီတော့ နောက်တစ်ပတ်မှာ ၄ ရက်ခွဲတောင် အလုပ်ပိတ်မယ်။ တချို့အလုပ်တွေမှာဆို ၆ ရက်နေ့ ပါ ပိတ်လို့၅ ရက် အားလပ်ရက် ရတယ်ပြောတယ်။ ၆ ရက်နေ့လုံးဝ မပိတ်တာထက်စာရင် နေ့ တစ်ဝက် ပိတ်လည်း အကြောင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ခုတလောက user တွေ အားလုံးလည်း Holiday Mood ၀င်နေတော့ အလုပ် သိပ်ရှုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အားလပ်ရက်တွေ အကြောင်း ရေးလိုက်လို့ လား မသိဘူး၊ နည်းနည်း နေလို့ကောင်းသွားတယ်။ အင်း.. လုပ်စရာမရှိ ရှိတာလေးတွေရှာပြီး အလုပ်လုပ်လိုက်အုံးမယ်။ ဒီနေ့ညနေမှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ထမင်းလိုက်ကျွေးမယ် ပြောလို့သွားစားရအုံးမယ်။ ညနေမှာ များများစားနိုင်အောင် အခုအချိန် နေကောင်းအောင် ကြိုးစားနေမှ ဖြစ်မယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 2/01/2008 04:44:00 PM 1 comments
Myanmar Announces to hold A General Election In 20...
Gtalk freezes With Show Music Status using Winamp ...